Allgedo.com » 2013 » February » 18
Home » Archive Daily February 18th, 2013
Maxamed Cabdi Kaliil oo sheegay in ay Garbahaarey ku qaban doonaan shir looga tashanayo maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka (Dhageyso)
Guddoomiyaha gobolka Gedo, Maxamed Cabdi Kaliil ayaa ganafka ku dhuftay qorshaha maamul goboleedka ee uu abaabulkiisu ka socdo magaalada Kismaayo. Kaliil oo ay maanta asaga oo magaalada Garbahaarey ku sugan wareysatay laanta af Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in ay fidiyeen gogol ay ku macsuumeen dhamaan qeybaha bulshada Soomaaliyeed ee wax ka daga gobolada Jubbooyinka iyo dowladda Federaalka Soomaaliya. Shirka...
Maxaa keeney weerarkii lagu qaadey Masjidka Xaram 1979? By Adam Abdi Abuzuhri
Assalaamu Alaykum. Maanta iyo qoraalkeena waa qiso dhab ah oo ka dhacday Xaramka mudo iminka laga jooga 34 sano! Qof kasta oo Muslim ah waa fahansan yahay qeymaha iyo qadarinta ay naga mudan tahay magaalada barakaysan ee Makka Al-Mukarramah. Makka qof lagu dila iskadaaye, geedaheeda lama ogala in la gooya. Xitaa qofkii niyada xumaan u qaada magaaladaas Allah wuxuu ku abaalmarin doonaa Cadaabka...
Culimada Soomaaliyeed ee reer Qatar oo ka tacsiyeeyay dilkii Sh. Cabdulqaadir Nuur Faarax (Gacamey)
انـــــا للـــــه وانــا اليـــه راجعــــون Anagoo ah culimada iyo odayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Qatar waxaan ugu tacsiyadeynaynaa ummadda Islaamka guud ahaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ee ku timid Sheekh Cabdul-Qadir Nuur Faarax (Gacameey). Waxaan Allah ugu rajaynaynaa inuu ka waraabiyo Janadiisa Firdowsa, ummmadana siiyo...
Ciidamada Dowlada Ethiopia iyo kuwa Soomaaliya oo la Wareegay Deegaano ka tirsan Gobolka Bay
Ciidamada Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxay weerar ku qaadeen goobo ay fariisamo ku lahaayeen xoogagga Al-shabaab oo la kala yiraahdo Manaas, Bulo-barako, Bootis iyo Goorisane, waxaana la sheegayaa in dhammaan goobahaas ay la wareegeyn Ciidamada Dowlada Ethiopia iyo kuwa Soomaaliya . Deegaanadaasi oo isku xira Magaalooyinka Baydhabo iyo Diinsoor waa kuwa ugu badan wax-soo-saarka dhinaca beeraha, gaar...
Ergayga Midowga Yurub ee Soomaaliya oo ka Hadley Dilkii Sh. Cabdiqaadir Gacamey
Ergayga gaarka, ahna Danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya, Michele Cervone d’Urso, wuxuu si xoog leh u cambaraynayaa dilki Sheikh Abduqadir Nuur Faarah ee dhawaan ka dhacay Garowe iyo werarkii baaburka bamka ee ka dhacay 16/2/2013 maqaayada Xeebta Lido ee Muqadisho. Wuxuuna uga tacsiyadeynayaa eheladi laga dhintay iyo kuwii ku dhaawacmayba iyo bulsha weynta Soomaaliyeed ee ay dhaawacday khasaarahaa...
Madaxweynaha Faransiiska oo Rajo wanaagsan ka muujiyey Nabada Soomaaliya
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay in nabad ka xasisha gayiga Soomaaliya ay tahay mid u riyaaqayaan dhamaan beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed oo mudo badan dagaalo Sokeeye ku soo jiray. War uu xafiiskiisa Baaris ka soo saaray saxaafaduna ay baahiyeen ayuu ku sheegay hadalkaan Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande,oo ka hadlay xaaladaha dalka Soomaaliya haatan halka...
Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya iyo Madaxweynaha Puntland oo ku kulmay Magaalada Garoowe
Ka dib kulan Magaalada Garoowe ee maamulka Puntland ku dhexmaray Wasiirka arimaha gudaha ee Dowladda Soomaaliya iyo Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxaa soo baxaya faah-faahin dheeraad ah oo ku aadan waxyaabaha ay kawada hadleen labada masuul. Xildhibaan Nuur Faarax Jaamac oo kamid ah wafdiga Wasiirka arimaha gudaha ee ku sugan Magaalada Garoowe ayaa sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee labada...
Tacsi ku socota qoyska iyo qaraabada uu ka tagay AUN maxuun Shire Kuluc Daadoxo.
Inaa lilaahi wa Inaa ilaahi raajucuun. Waxaa xalay oo tariiqdu ahayd February 14, 2013 ku geeriyooday magaalada caabudwaaq Adeer shire Kuluc Daadoxo. Ilaahay janadii fardowso haka waraabiyo, Samir iyo iimaana alaha anaga iyo qoyskii uu ka baxayba ha naga siiyo. Anaga oo ah dadka uu magacooda hoos ku xusan yahay waxaan tacsi u diraynaa dhamaan reer shire Kuluc oo ay ka mid yihiin: 1. Murayad...
Dowlada Soomaaliya oo Beenisey in ay is hortaag ku Sameysay Maalgelinta Ciidamada Badda Kenya.
Maxamed Cali Nuur (Ameeriko) oo ah safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in Soomaaliya ay ishortaagtay qorshihii ay dawlada Kenya ku doonaysay $10 milyan, kaasoo ay rabtay Kenya inay u ansixiyaan golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ameerico ayaa hadalkaan ka sheegay xilli uu wareysi siinayay Wargeyska The Daily Nation ee ka...
Kenya oo Hanjabaad u jeedisey Dagaal yahanada Alshabaab iyo Waxyaabaha Qarxa oo laga helay Gaarisa
Saraakiisha dowlada Kenya,ayaa shaaca ka qaaday in weerarada qaraxyada ah ay ku siibadanayaan gudaha dalka Kenya gaar ahaan magaalooyin muhiimka ah ee waqooyiga dalkaasi. Ngatia Iregi,oo sarkaal ku xigeen dhanka waaxbaarista danbiyada ayaa sheegay inay heleen meydka shaqsi iyo labo bistoolad,kuwaasi oo ay ka heleen Magaalada Gaarisa ee maamulka Gobolka NFD,kadib markii habeen ka hor halkaasi uu qarax...